नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : साला ! उबेला दिल्लीको भात खाएर नोयडा बसिन्थ्यो !
साला ! उबेला दिल्लीको भात खाएर नोयडा बसिन्थ्यो !
साला ! उबेला दिल्लीको भात खाएर नोयडा बसिन्थ्यो । यता भारतका नेतालाई यस्ता मुला चिठि दिनकै ३ वटासम्म लेखिन्थ्यो र उता लाटाँगाडालाई भारतिय बिस्तारवाद बिरुद्द , सुरुङ युद्द लड्ने हो, ठोक भनिन्थ्यो । लाटागाँड पनि हुरुहुरु, इतिहसमा नाम लेखाउन र अमर हुन भन्दै , गुलेली बोकेर सेनाका ब्यारेक हान्न जान्थे । अनि, चरो झरे जसरी पुग्लुक पुक्लुक्क मर्थे । भोलीपल्ट ,यसो एउटा बिज्ञप्ति निकालेर फुरुक्क पार्दियो । अमर भइस भन्दियो । इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले नाम लेखियो भन्दियो । कुरो सकियो ।
कसैलाई अत्तोपत्तो हुदैन थियो । काम दनादन सम्पन्न हुन्थ्यो ।
अहिले त छिसिक्क बोल्न हुन्न । आज बोल्यो, भोलीपल्ट फेसबुकमा छ्याप्छ्याप्ती हुन्छ । सबै बाठा । सबै बरिश्ठ ।
यसो अध्यारा कुनामा कसैलाई नदेखाई, चिठि लेखेर देशी/ बिदेशी प्रतिकृयावादीहरुलाई लट्याङपट्याङ परुत् भन्यो । साला ! भोलीपल्ट आफ्नै चिठि , आफ्नै आईफोनमा ह्व्वार्ह्वार्ती आउछ । आफ्नोमा मात्रै आए त हुने । एकैपटक सारा लाटाँगाडाका फोन फोनमा पुग्छ । अनि एउटाले सेयर गर्छ । पछि अर्कोले गर्छ । अनि फेरि अर्कोले गर्छ । अनि हिजोअस्ति भए, गुलेली बोकेर सेनाको ब्यारेक हान्न जाने लाटागाँडा मेरै चिठि सेयर गर्दै, मलाई नै ब्याङ्य र प्रश्न गर्छन ।
साला ! आईफोन नि साम्राज्यवादीको । फेसबुक नि उसैको । चिठि चाहि क्रान्तिकारीको !
माने ! पुँजीवादले बिज्ञान र प्रविधिमा ठुलो बिकास गरेर, सर्बहारा बर्गलाई नराम्रोस्ंग घाटा भयो । समाजवादी आन्दोलनलाई ठुलो क्षेति भयो ।
यो साला अमेरिकी सम्राजवादाले गर्दा ,कान्छि चाहि छोरीलाई बिज्ञप्ति निकाल्नको हैरानी भएको छ हिजोआज । फेरि बिज्ञप्ती लाटागाँडाले पत्याए हुन्थ्यो नि !
यति लामो बिज्ञप्ति निकालेर पनि, नाङै हिड्नु परेजस्तो अनुभुति हुन्छ । त्यसैले यो सम्रज्यवाद, फेसबुक, टुईटर , आईफोन जुन छन, ति अहिलेका सबैभन्दा ठुला बर्गसत्रु हुन । एम्सिसि भन्दा नि टुलो बर्गसत्रु । ल जा ।